Panasonic Steam Iron NI-M250TPSG (Pink) ~ ICT.com.mm
HomePanasonic Steam Iron NI-M250TPSG (Pink)
Panasonic Steam Iron NI-M250TPSG (Pink)
Powerful (Max): 1550W Power Shot: 75 g Vertical Shot Continuous Steam: 0-15 g/min Anti-Calc System Advanced Titanium Coated Soleplate Rated Voltage: 220-240 V / 50-60 Hz Wattage: 1300-1550 W Auto-Shut-Off: No Spray:... [Learn more]
Brand: PanasonicSKU: 189906N/ASee more: Lifestyle, New Arrivals, Panasonic, Products, Sewing, Cleaning & Laundry, Shop, Under 100kFilter by: Irons & Garment Steamers
Powerful (Max): 1550W
Power Shot: 75 g
Continuous Steam: 0-15 g/min
Rated Voltage: 220-240 V / 50-60 Hz
Wattage: 1300-1550 W
Steam: 15±6 g/min
Panasonic ရဲ့ NI-M250 မီးပူတွေကတော့ ရေနွေးငွေ့အသုံးပြုထားတာဖြစ်လို့ အဝတ်တွေကို အချိန်တိုအတွင်း လျင်မြန်ညီညာစွာ ပြန့်ပြူးစေနိုင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် မီးပူအောက်ခံပြားကို တိုက်တေနီယမ်နဲံ့ ပြုလုပ်ထားတာကြောင့် အဝတ်တွေ ကပ်ငြိခြင်း လုံးဝမရှိိစေနိုင်ပါဘူး။ လို်က်ကာခန်းဆီးတွေ ၊ ချိတ်ထားတဲ့ အဝတ်တွေကို အားကောင်းတဲ့ ရေနွေးငွေ့အားနဲ့ ပက်ဖျန်းပေးနိုင်ပြီး အနံ့အသက်ဆိုးတွေကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါသေးတယ် ။ လျင်မြန်ပေါ့ပါးတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ အရည်အသွေးမြင့် Panasonic NI-M250 မီးပူလေးတွေကို နီးစပ်ရာ Panasonic Showroom တိုင်းမှာ အခုပဲအပြေးဝယ်လိုက်တော့နော်။
Panasonic NI-M250 iron use continuous steam and made your clothes smooth in short time. Advanced Titanium coated soleplate will prevent your clothes from burn. Remove the winkles and bad smell on hanging garments and curtains by shooting steam. You can buy the easy and light high quality Panasonic NI-M250 at near Panasonic showroom now.
Total price:K127,000 K110,200
This item: Panasonic Steam Iron NI-M250TPSG (Pink) K31,000